जेठसम्ममा काँग्रेस महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा डा. शेखर कोइरालाको जोड « रिपोर्टर्स नेपाल
जेठसम्ममा काँग्रेस महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा डा. शेखर कोइरालाको जोड
काठमाडौं, १० कात्तिक। नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली नेता डा. शेखर कोइरालाले कोरोनाकै बीचमा पनि आगामी जेठसम्ममा महाधिवेशन गर्ने संकल्प आज दशैको दिनमा गर्न पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् । उनले दशैंको शुभकामना दिदै संकल्पका साथ महाधिवेशनमा लाग्नुपर्ने समेत बताए ।
“कोरोनाकै बीचमा पनि कसरी महाधिवेशन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आजैदेखि बहस चलाइयोस्, नेतृत्वलाई म यही सुझाव दिन र आग्रह गर्न चाहन्छु,” नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा ऋषि धमलासँगको कुराकानीमा उनले भने ।
आगामी महाधिवेशनमा पार्टी सभापतिका आकांक्षी समेत रहेका कोइरालाले कोरोनालाई बाहना बनाएर महाधिवेशन नै नगर्ने बाटोमा पार्टीहरु जाने हुन की भन्ने आशंका बढ्दै गइरहेको पनि बताए। नेता कोइरालाले भने, “संघीय संसदमा रहेका मुख्य चार ओटै पार्टीको महाधिवेशन गर्नुछ, चारै पार्टीको नेतृत्वले महाधिवशेन टार्दै लैजाने सहमती गर्ने हुन की भन्ने डर पो लागेको छ ।”
”पार्टीहरु महाधिवेशन नगर्ने बाटोमा जाने हो भने मुलुकको राजनीति र लोकतन्त्रको अवस्था के होला ?” उनले प्रश्न गरे । पार्टी प्रवेश कार्यक्रमहरु धमाधम गरिरहन मिल्ने तर साना साना भेलाबाट हुन सक्ने स्थानीयस्तरका अधिवेशनहरु भने हुन नमिल्ने कुराले पनि आशंका जन्माएको टिप्पणी गरे ।
“पाँच हजार मान्छेलाई भेला गरेर अर्को बर्षको भदौमा पनि महाधिवेशन गर्न सकिदैन, त्यसैले कोरोनाका बीचमा पनि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने संकल्प र बहस आजैदेखि होस, दशैँमा यही छ शुभकामना,”उनले भने ।
काठमाडौं, २० मंसिर । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय बैठक दिउँसो १ बजेका लागि तोकिएको छ
ओली-प्रचण्ड आ-आफ्नै बाटोमा, नेकपा दुर्घटनातर्फ बढ्यो
काठमाडौं, २० मंसिर । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज
गोयल, नरवणे र श्रृंगलाको भ्रमणपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ उचाईमा
मंसिर १९, काठमाण्डौ । सिमा विवादले तिक्तता बढेको नेपाल भारत सम्बन्धमा विस्तारै सकारात्मक संकेत देखिन
गाँजा बहस : हानिकारक लागुऔषधको सूचीबाट हटेपछि नेपालमा के हुन्छ ?
मंसिर १९, काठमाण्डौ । नेपालमा गाँजा प्रतिबन्ध छ । यसको खेति, किनबेच र प्रयोगलाई कानुनले
काँग्रेस आन्दोलनमा, २९ गते देशव्यापी प्रदर्शन
काठमाडौं, १९ मंसिर । नेपाली काँग्रेस सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको छ । काँग्रेसले २९ मंसिरमा देशभर
उपत्यकामा आज ६०६ संक्रमित थपिए
काठमाडौं, १९ मंसिर । काठमाडौं उपत्यकामा २४ घन्टामा ६०६ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् ।
२४ घन्टामा १५ सय ७५ संक्रमित संक्रमण मुक्त
काठमाडौं, १९ मंसिर । २४ घन्टामा देशभर १५ सय ७५ जना कोरोना संक्रमित संक्रमण मुक्त
आज थप १६ कोरोना संक्रमितको मृत्यु
काठमाडौं, १९ मंसिर । कोरोना संक्रमणबाट आज थप १६ जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै